को दल को दायित्व uncompensated प्रयोग गैर-आवासीय परिसर को सम्झौता निष्कर्षमा
आधुनिक व्यापार सम्पत्ति को अनावश्यक प्रयोग मा सम्झौता को सामान्य निष्कर्षमा छ। यो सम्झौता को सार एक पक्ष करार, आधारभूत निर्दिष्ट अवधिका लागि remuneration अन्य पक्ष लागि दावी बिना प्रयोग गर्न, यो स्वामित्वको, उदाहरण, गैर-आवासीय परिसर लागि, बिना एक इनाम माग्दै दिन्छिन् अर्थ छ। सम्झौता यस प्रकारको हुन मानिन्छ एक ऋण सम्झौता, र कागजात, क्रमशः, को ऋणदाता र उधारकर्ता को signatories।
पट्टे गैर-आवासीय परिसर भौतिक विभिन्न सर्तहरू को अनावश्यक सम्झौता, द्वारा देखि कागजात किनभने यसको अभाव को मूल्य निर्दिष्ट गर्दैन। कम्पनीहरु बीच र व्यक्तिहरूलाई बीच दुवै गर्न सक्छन् सम्बन्ध यस प्रकारको कारण। फर्म को कर्मचारी - यो मामला मा एक सीमा मुक्त प्रयोगको लागि परिसर स्थानान्तरण गर्न संभव ऋणदाता एक व्यावसायिक उद्यम र ऋण प्राप्तकर्ता छ भने छ भन्ने छ। वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत सम्पत्ति को स्थानान्तरण अनावश्यक प्रयोग गर्ने पार्टीहरूले सहमत कुनै पनि समयमा बाहिर गर्न सकिन्छ।
uncompensated प्रयोग गैर-आवासीय परिसर को सम्झौता छैन निष्कर्षमा गरिनेछ छलफल र यदि कारोबार वस्तु सन्धि द्वारा पहिचान छैन। त्यो छ भने गैर-आवासीय परिसर, को सही स्थान नागरिक व्यवस्था, उत्पादन वा वाणिज्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिन्छ, र यसको कुल क्षेत्र सूचीबद्ध छैन संरचना, भाग को परिभाषा अनुसार जो।
करार सर्तहरू को दल द्वारा सहमत ऋण को, र अनुमति जो पाठ, मा संकेत रूपमा करार को निष्कर्षमा निर्दिष्ट रूपमा र अन्त को मिति, समय सीमा रूपमा बस नै निर्दिष्ट बिना शब्द गैर-आवासीय परिसर को पट्टे। अक्सर भाडामा र जो कुनै पनि मामला मा गरेको हुन सक्छ कानुनी विकल्प, को सहभागी अनावश्यक प्रयोग को अवधारणा, किनभने जो पट्टा मा मुख्य बिन्दु को पट्टादाता द्वारा हस्तान्तरण सम्पत्ति लागि भुक्तानी छ भन्ने हो आवश्यक।
त्यस अवस्थामा, यदि हस्तान्तरण सम्पत्ति को सम्झौता अवधि ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा क्षतिग्रस्त भएको थियो, आफ्नो कर्तव्य भएको ऋणदाता गर्न कारण भएको क्षति मर्मत गर्न छ। क्षति को हदसम्म शारीरिक पहनने को मूल्य संग मूल्यांकन वस्तु मूल्य देखि निर्धारण गरिन्छ।
मालिक को बासना पक्ष सही हटाउन छैन uncompensated प्रयोग गैर-आवासीय परिसर को सम्झौता को गैर-आवासीय परिसर स्थानान्तरण, तर ऋणदाता साथै एक encumbrance प्राप्त गर्दछ। यस्तो सम्झौता अवधि पछि मालिकले संक्रमण सही, त्यो छ, बेच्न, दान, र जमानत रूपमा यो गैर-आवासीय परिसर प्रयोग गर्न सक्दैन।
कि भूल छैन, ऋण सम्झौता मा लागत को अभाव भए तापनि उधारकर्ता कर अधिकारीहरूले गर्न रिपोर्ट हात समय नियमित, गैर-आवासीय परिसर लाभ ल्याउँछ कुनै पनि गतिविधि समावेश किनभने हुनुपर्छ।
धेरै को चासो यसको निपटान मा अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न चाहने र ऋणदाता जहाँ पाउन, र यो किन छ लाभदायक सम्झौता अनावश्यक प्रयोग गैर-आवासीय परिसर?
अक्सर, यो मामला मा बासना पक्ष विभिन्न नगरपालिका प्रशासन र छ करार को विषय परिसर र शैक्षिक र पूर्वप्राथमिक संस्थाहरु को भवनहरु छन्। यो रकम को कमी, साथै विद्यालय र Kindergartens राजधानी निर्माण शहर को ब्यालेन्स छन् भन्ने तथ्यलाई छ, र कारण सम्झौता को यो फारम छ।
साथै, धेरै संस्थाहरू छन् कि वित्तीय चासो छैन राजधानी निर्माण परियोजनामा सम्पत्ति प्रयोग गरेको छैन।
के तपाईं यस्तो सम्झौता प्रवेश गर्ने निर्णय भने, यो तपाईं हुनेछ पक्ष कुरा छैन, साइन गर्न पूर्व आफूलाई भविष्यमा अनावश्यक जोखिम देखि रक्षा गर्न योग्य कानुनी सल्लाह प्राप्त गर्नुपर्छ।
नयाँ कार दर्ता गर्नुहोस्। अर्डर र सुविधाहरू
प्राविधिक स्तर: परिभाषा, विशेषताहरु, उदाहरणहरू
एक स्थानीय अभिव्यक्ति के हो? संगठन को स्थानीय normative प्रेरित
बेरोजगारी लाभ कसरी प्राप्त गर्न
कसरी स्यान्डबस्टर आफैलाई बनाउनुहुन्छ?
"Zathura: एक स्पेस साहसिक": अभिनेता र फिलिम भूमिकाको
धमाकेदार माछा। व्यञ्जनहरु।
ताजिकिस्तान स्थान: वर्णन, सुविधाहरू, मान्छे र रोचक तथ्य
खाना पकाउने खाने: चिकन नुस्खा, gherkins
कसरी चलिरहेको र के को लागि सुरु गर्न?
पशु कक्षहरू - ज्ञान को इतिहास